Description/subject: JOIN THE CAMPAIGN: There are over 2,100 political prisoners languishing in prisons all over Burma. Free Burma’s Political Prisoners Now aims to collect 888,888 signatures before 24 May 2009, the legal date that Daw Aung San Suu Kyi should be released from house arrest. This isaunited global campaign working with overahundred groups from around the globe. The petition calls on UN Secretary General Ban Ki-moon to make it his personal priority to secure the release of all political prisoners in Burma, as the essential first step towards democracy in the country... HERE’S WHAT YOU CAN DO! 1. Sign the Petition... 2. Get your friends, families, and colleagues to sign. (Join our pages on Facebook and Youtube as well)... 3. Download the campaign kit (to the left) and get those in your community involved. Tell them about the situation in Burma and the courageous actions of Burma’s political prisoners... 4. Tell the FBPPN Campaign Committee what you are doing so that we can share with others about the global movement for Burma’s political prisoners. Email info@fbppn.net... WHY THIS CAMPAIGN IS SO IMPORTANT: Daw Aung Suu Kyi says, “We are all prisoners in our own country.” Political prisoners are not criminals. They have courageously spoken out on behalf of those who have been silenced. The release of all political prisoners is the essential first step towards freedom and democracy in Burma. There can be no democratic transition without them. They must be allowed to freely participate in any future democratic political process.
Description/subject: This is your chance to help bring long-lasting change to Burma! Burma is one of the poorest countries in the world. It is ruled by one of the world’s most brutal regimes, guilty of every possible human rights violation. It has one of the worst records of religious persecution in the world. Let us paint youapicture of the desperate situation ... * Over 2,000 political prisoners are in jail subjected to terrible torture. * Over 70,000 child soldiers have been forcibly conscripted into the army. * Over 3,200 villages in Burma in Eastern Burma have been destroyed since 1996. * Over 2.5 million people are suffering asaresult of the cyclone and the regime’s obstruction of aid. * Over 1 million people are displaced in the jungle. You have the chance to help us paintadifferent future for Burma. Change for Burma! is an exciting new joint campaign by Christian Solidarity Worldwide (CSW) and Partners Relief and Development UK. Our aim is to bring long-lasting change to Burma and to see the international community take action on behalf of those suffering in Burma. We want to see freedom and justice restored to the people of Burma. Joining us and taking action today will help us raise awareness of the issues and lobby the UK government, United Nations and international community to take concrete action to bring change to Burma. You can be part of the change today – here’s how to get involved ...
Description/subject: ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းဌာနမှသတင်းထဲတွင် နေပြည်တော်သည် ရေကာတာ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၄ ခု ကို နမ္မတူ( မြစ်ငယ် (သို့) ဒုဋ္ဌဝတီ )မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းအနက် ရေကာတာ (၃)ခုသည် ယခု ရှမ်းပြည်နယ် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ရာနေရာအတွင်းတွင်ဖြစ်နေသည်။ ၎င်းရေကာတာသစ်များ နှင့် ရဲရွာရေကာတာတို့သည် မြစ်ကြောင်းတခုလုံး၏ထက်ဝက်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ဆဲအထက်ရဲရွာရေကာတာသည်နောင်ချိုမြို့နယ်တွင်ရှိပြီးဗမာစစ်အစိုး ရက၂၀၀၈ခုနှစ်မှစ၍တည်ဆောက်ခဲ့သည်၊၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်ပြီးရန်ခန့်မှန်းထားသည်။ တည်ဆောက်မည့်ရေလှောင်ကန်သည် အကျယ်အ၀န်း (၆၀) ကီလိုမီတာ ရှိသည်။လူဦးရေ (၅၀၀)ခန့်နေထိုင်သည့် ရှမ်းရွာကြီး ဖြစ်သော တာလုံရွာသည် ရေအောက်လုံးဝမြုပ်သွားပြီးသီပေါမြို့ ၏တစ်စိတ်တပိုင်းတို့မှာ လည်း ရေအောက်မြှပ်သွားနိုင်သည်။ တာလုံ ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ (ဆိပ်ကမ်းကြီး)ဟုဆိုသည်၊စည်ကားသာယာသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်- မြောက်ပိုင်းတွက် အော်ဂင်းနစ် သဘာဝလိမ္မော်သီး၊ ကျွဲကောသီးတို့မှာ နမ္မတူမြစ်ကမ်း တစ်လျှေက်တွင် စိုက်ပျိုးကြ၍ လူသိများသည်။ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် ရှေးပဝေသဏီ ကတည်းက တည်ထားကိုးကွယ်သော စေတီပုထိုးများလည်းရှိသည်။ ရေကာတာ မတည် ဆောက်မှီကတည်းက တာလုံရွာသားတို့အား အကြောင်းကြားခြင်း မရှိသည့်ပြင် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်မှုများမရှိခဲ့ပေ။ သဘာဝနှင့် လူမှုဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု အကဲခတ်အဖွဲ့ (ESIA) Environment and Social Impact Assessment တို့က၂၀၁၄ ခုနှစ်မှသာ စလုပ်ဆောင်လာသဖြင့် ရေကာတာစဆောက်ပြီး(၆) နှစ်မှ ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။(ESIA)လုပ်နေစဉ်တွင်လည်း တာလုံရွာမှ ဒေသခံပြည်သူလူထုတို့မှာ ပြောင်းရွှေ့မှုကို မလိုိလားကြကြောင်း ရှင်းရှင်းဖေါ်ပြကြသည်။ သို့သော်လည်း ဒီရေကာတာတည်ဆောက်မှုကို တရုတ်အရင်းအနှီး နှင့်ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပြီး တရုတ်၊ဂျပန်၊ဂျာမန် နှင့် ဆွစ်ကုမ္မဏီ တို့လည်းပါဝင်ပတ်သက်နေသည် ရေလွှဲပေါက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း မှ ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပြီး ရေကာတာ၏ အဓိကနံရံကို၂၀၁၆ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင်တည် ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ် နမ္မတူ မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်မည့် အခြားသော ရေကာတာ စီမံကိန်းများမှာ နောင်ချိုမြို့နယ် တည်ဆောက်နေသော အလယ်ရဲရွာ ရေကာတာစီမံကိန်းသည် နော်ဝေနိုင်ငံပိုင် အက်စ် အင်န်ပါဝါ ( SN Power) တာဝန်ယူတည်ဆောက်သည်။ သီပေါမြို့နယ်ရှိ နမ္မတူမြစ် ပေါ်တည်ဆောက်နေသည့် ရေကာတာလည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသလို ထိခိုက်နစ်နာမည့်လူထူကို ဆွေးနွေးအကြောင်းကြားခြင်းမရှိပေ။ ၎င်းရေကာတာ များ၏ အဆင့်များကြောင့် မြစ်ချောင်းပေါ်ရှိ သဘာဝဂေဟ စံနစ်ကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်နိုင်သည်။ငါးများသွားလာကျက်စားရာကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသဖြင့် သီပေါမြို့မှ ထောင်ပေါင်းသော ရပ်သူ၊ရွာသားအများ မှီခိုစားသောက်ရသော ငါးများ ထိခိုက်နစ်နာနိုင်သည်။ အထက်တွင်ရှိ သတ္တုတူးဖေါ်သည့် လုပ်ငန်းများကြောင့် ရေလှောင်ကန်များ အဆိပ်သင့်ရကာ ငါးတွေနှင့် အမှီပြုသည်သူများ၏ကျန်းမာလည်း ထိခိုက်နိုင်သည်။ သဘာဝပေါက်ပင်များ ရေဠေယင်ကန်တွင် ပုပ်သိုးပြီးမီသိန်းဓါတ်များထုတ်လွှတ်သဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုပူနွေးလာမှု ကို ပိုဖြစ်စေသည်။ အခြားသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာ သီပေါမြို့နယ် နမ္မတူရေကာတာ စီမံကိန်းအောက်ပိုင်းတွင် နေသောသူများသည်ရေကာတာလုပ်ငန်း၏ ရေအတက်အကျကိုမခန့်မှန်းနိုင်ရကာမြစ်ကမ်း တစ်လျှောက်တွင် ရုတ်တရက်တစ်ရှိန်ထိုးရေကြီးလာနိုင်သော အန္တရာယ်များ ကြုံနိုင်သည်။အကယ်၍ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပါက ကြီးမားသောရေထုထည်ကိုရေဂါတာ က လွှတ်ချမည်ဖြစ်သဖြင့် မြစ်အောက်ပိုင်းတွင်ရေဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုထက်ပို၍ စိုးရိမ်ပူပန်စရာကောင်းသည်မှာ ရေကာတာကျိုးပျက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။မိုးသည် ထူးကဲစွာသဲထန်ရွာခြင်း၊မြေပြိုခြင်း၊ငလျှင်လှုပ်ခြင်းများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အလယ်ရဲရွာ ရေကာတာ စီမံကိန်းသည် ကျောက်ကြံ့ ငလျှင်လှိုင်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်၊၎င်း ကျောက်ကြံငလျှင်လှိုင်း သည် ၁၉၁၂ ခုနှစ်က ရိတ်တာစကေး ၈ ခန့်ရှိပြီး မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံးငလျှင်လှုပ်ဖူးသည်။ ရေဂာာတာရေလှောင်ကန်၏ အလေးချိန်ကြောင့်မြေနိမ့်ကျခါ ငလျှင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းကြောင့် လည်း ကြီးစွာစိုးရိမ်ပူပန်ရပါသည်။ရေကာတာကျိုးပဲ့ပျက်စီးပါက အောက်ပိုင်းရှိ ရေကာတာ များလည်းကျိုးခါ အနိမ့်ပိုင်းရှိ မရေတွက်နိုင်သောရပ်ရွာများကိုပါ ဆူနာမီဘေးဆိုး ကဲ့သို့ ကျ ရောက်ခံစားရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် နေပြည်တော်သည်တိုက်ပွဲဖြစ်ရာ ဇုန်တွင် သိသာမြင်သာမှုမရှိသည့် ရေကာတာ စီမံကိန်းကိုအတင်း ဆက်လက် ဖိလုပ်နေခြင်းသည် အမျှော်အမြင်နည်းရာ ကျသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရေကာတာစီမံကိန်းဆောက်မည့်နေရာတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အစောပိုင်းကတည်းကပင် တိုက်ခိုက်မှု သည် ပိုမိုများပြားလာသည်။ နေပြည်တော်က သဘာဝသံယံဇာတကို လက်ဝါးကြီးအုပ်နေမှုသည် ဒေသခံတိုင်းရင်းသား တို့နှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းဖြစ်ရာ စိတ်ထိခိုက်ခြင်းနှင့် ပဋိပက္ခများသာ တိုးပွါးလာစရာသာ ရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှ အစိုးရသစ်ဖြစ်သော NLD (အန်အဲယ်ဒီ) အား အထက်ရဲရွာ ရေကာတာ အပါအဝင် နမ္မတူ ရေကာတာသစ်တည်ဆောက်မှုစီမံကိန်းအကောင်ထည်ဖော် မှု အားလုံးချက်ချင်း ရပ်တန့်ပေးပါရန်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုပါသည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်နေသော တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများတွင် ဖက်ဒရယ်အတွက် သဘောတူညှ်ိနှိုင်းမှု တည်ဆောက်မ၊ှု၊ စစ်မှန်သော တစ်နိုင်ငံလုံးငြိမ်ချမ်းရေးနှင့် သဘာဝသံယံဇာတ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ခွဲဝေမှု တို့ဖြင့်သာ နမ္မတူမြစ်ချောင်းတစ်လျှောက်အနာဂတ် ရေအားလျှပ်စစ်ဖွံဖြိုးရေးကို စဉ်းစား နိုင်မည်။ နမ္မတူမြစ်ပေါ်တည်ဆောက်မည်ဆိုပါက ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကိုမဆို မြစ်ကြောင်း တစ်လျှောက် သက်ရောက်မည့် ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ကိုထင်ရှားသိသာမှုရှိခြင်း၊သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားဌာနေ လူမျိုးများအားကြိုတင်ညှိနှိုင်း သဘောတူညီမှုရယူရမည်။
Description/subject: "Profiles of '88 Generation Students: The '88 Generation Students group is comprised of Burma's most prominent human rights activists after Nobel Peace Prize recipient Aung San Suu Kyi. After Burma's military regime drastically raised the price of fuel in August 2007, the '88 Generation Students organizedanon-violent protest walk in which they were joined by hundreds of everyday Burmese people. The '88 students were immediately arrested and have been held ever since. Anger at the arrests and the Burmese regime's treatment of Buddhist monks spiraled into last September's "Saffron Revolution" that saw hundreds of thousands of Buddhist monks marching peacefully for change. In late August 2008, inablunt rejection of the United Nations Security Council and just days after two UN envoys traveled to Burma seeking democratic change and improvements in human rights, the country's military regime hauled dozens of the '88 Generation Students from prison cells into court in order to begin "sham" trials that will likely result in over 150 years of incarceration. List of '88 Generation Students..." "The Burma Fund published this report on 22 November, 2008 — the 88th Anniversary of the first historic boycott against British colonial rule by Rangoon University students (The day is now designated as the National Day of Burma). This report honors all members of the 88 Generation Students Group who had already served long prison terms but are once again being detained by the Burmese military regime since August 2007. It salutes these modern heroines and heroes for their selfless struggle for democracy and human rights and for their courage in upholding the legacy of those who had staged the historic University Boycott of 1920 as well as the “Spirit of the Fighting Peacock” to bring an end to the unjust military rule in Burma."